Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » kariska » Cunto-badeedka ugu Wanaagsan: Kalluunka duulaya iyo Cou Cou oo ka yimid Barbados
Lahaanshaha sawirka Cooking&Cocktails
Waxaa loo tixgeliyey saxanka qaranka ee Barbados, Flying Fish iyo Cou Cou waa habka ugu fiican ee loogu talagalay dadka jecel cuntooyinka badda inay isku dayaan. Kalluun cad oo succulent, suucy, iyo si fiican u basbassan ayaa lagu daraa cou cou, oo ah cunno Barbadiya ku salaysan oo galley ah. Diyaar ma u tahay inaad barato sida loo sameeyo saxan Barbadiyaan guriga?
Sida Loo Sameeyo Kalluunka Duulaya Iyo Cou Cou?
Cunnada Barbados waa dheri dhalaalaysa oo cajiib ah oo dhadhan muuqda kuwaas oo saameynaya England, India, iyo Afrika si ay u abuuraan suxuun cajiib ah oo kala duwan.
Kuugleyda Bajan ayaa adeegsada wax soo saarka gudaha ee quruxda badan si ay u abuuraan qaar ka mid ah suxuunta ugu macaan adduunka. Cunnooyinka caadiga ah ee Bajan ee laga yaabo inaad la kulanto jasiiradda waxaa ka mid ah macaroni pie, keega kalluunka, bariiska iyo digirta, konkii, beddelka qumbaha, iyo dabcan saxanka qaranka Barbados ee duulaya kalluunka iyo cou cou.
Inkasta oo ay jiraan cuntooyin badan oo cajiib ah oo ku yaal Barbados, maanta waxaan kaliya ka hadli doonaa kalluunka duulaya iyo cuntooyinka cou cou sababtoo ah haddii ay jirto hal saxan oo Bajan ah oo aadan rabin inaad lumiso, waa kan!
Cuntada qaranka ee Barbados waa cunto aad u fiican waana mid ay dadka deegaanku aad ugu hanweyn yihiin.
Xiddiga bandhiggu waa kalluun duulaya oo la shiilay oo la shiilay, oo ay la socdaan dhinac ka mid ah cou cou, taas oo u eg polenta ama roodhida, kuwa aan aqoon u lahayn cunnada. Casiirka lime, xawaashka iyo khudaarta cusub ayaa dhadhanka kor u qaada, iyaga oo abuuraya cunto Bajan ah oo cajiib ah.
Haddii ay dhacdo inaad dhawaan booqanayso Barbados, waxa fiican inaad cunto cunto u keento. Waxaan wax badan kaaga sheegi doonaa saxanka dhowr daqiiqadood, laakiin marka hore, waa kuwan asal.
Waa maxay Kalluunka Duulaya?
Kalluunka duula waa nooc ka mid ah kalluunka u dhashay jasiiradda Barbados. Dhab ahaantii, kalluunka ayaa mar aad ugu badan biyaha jasiiradda taas oo Barbados loo yaqaan "dhulka kalluunka duulaya." Markaa, la yaab ma noqon doonto in kalluunka duulaya uu yahay qaybta ugu muhiimsan ee saxanka qaranka ee Bajan.
Kalluunka duulista ayaa aad muhiim ugu ah dadka Bajaan, waxaana aad arki doontaa calaamad muujinaysa kalluunka duulaya oo ku qoran lacagta dalka, waxaana xitaa lagu arkay astaanta maamulka dalxiiska ee Barbados.
Waxaad weli ka heli doontaa kalluun duulaya liiska cuntada ee makhaayadaha jasiiradda. Kalluunka duulaya aad buu u dhadhamiyaa si fudud oo loo kariyey, iyadoo lagu uumiyo casiirka lime ee aashitada leh, sidoo kale waa la shiilay cajiib ah. Madaxa shiil kalluunka Bajan si aad u tijaabiso habka caadiga ah ee kalluunka duula ee ay u adeegaan dadka deegaanka.
Waa maxay Cou Cou?
Cou cou waa saxan aad wax badan ka heli doonto Barbados, laakiin maaha mid ku baahsan aduunka intiisa kale. Haddii aadan waligaa isku dayin ka hor, qiyaas wax la mid ah polenta ama dhogorta qoraalka.
Waxa laga sameeyay isku jira galley iyo okra. Labada shay ayaa isku duuban si ay u sameeyaan nooc boorash macaan leh. Cou cou ee Barbados waa saxan diirran oo raaxo leh oo si fiican ula socota qaar ka mid ah suxuunta Bajan - sida kalluunka duulaya! Waxa kale oo cajiib ah maraqa basbaaska leh, oo aad wax badan ka heli doonto cunnada Bajan.
Badanaa, cou cou waxaa loo adeegaa hab dhaqameed, taas oo ah in la sameeyo qaab oval ah, iyada oo la adeegsanayo baaquli dhaldhalaalka. Ama, haddii aad rabto inaad run ahaantii run noqoto, waxaad isticmaali lahayd qolof calabash ah, oo ka soo baxay midhaha geedka laga helay kaynta duurka kulaylaha iyo Ameerika. Cou cou waxa kale oo laga samayn karaa maaddooyin kale, sida rooti rooti, ​​yams ama muus cagaaran.
Kalluunka Duulaya iyo Cuntada Cou Cou
Dhaqan ahaan, dadka Bajaanku waxay kariyaan cuntadan maalmaha Jimcaha ama Sabtida, laakiin dabcan haddii aad barato inaad adigu sameysato waxaad u adeegi kartaa mar kasta oo aad rabto! Ku cajab galiya asxaabtaada iyo qoyskaaga dhadhankan macaan ee kulaylaha. Waa kan sida loo sameeyo
4 xabbo oo kalluun duulaya (haddii tan laga waayo meesha aad ku nooshahay, waxaad ku beddeli kartaa bass badda)
qanjaruufo budada toonta
Wixii xawaash ah:
3 basasha guga
2 xabo oo toon
1 tsp sinjibiil cusub
1 scotch bonnet basbaaska
1 qaado oo ah caleenta thyme
1/2 tsp xawaash isku dhafan
100 ml oo khal ah
1 qaado oo toon ah
5 g oo ah thyme
10 g oo budada curry ah
5g oo budo toon ah
6 qaado oo saliid saytuun ah
100g oo subag ah
140 g oo galley ah
Marka hore samee xawaash. Isku dar dhammaan maaddooyinka xawaashku, marka laga reebo khalka, mashiinka cuntada iyo garaaca wadnaha ilaa si fiican la isku daro. Ku rid koollada ku rid weel la dabooli karo oo ku dar khal. Si fiican u rux oo xilli sida aad doorbidayso. Waxaad u baahan doontaa inaad tan ka tagto ilaa laba saacadood ka hor intaadan isticmaalin, markaa meel dhig tan si aad u geliso.
Ku dar kalluunka lime, milix iyo basbaas.
Ku rid maaddooyinka suugada digsiga suugada oo isku kari, saliid yar. Ku dar hal qaado oo xawaash ah oo aad hore u diyaarisay.
Digsi gaar ah, ku dar maaddooyinka cou cou, marka laga reebo galleyda, oo keen karkari. Waxaad tan ku rabi doontaa kulayl sare. Marka la kariyo, cadaadis isku dar ah oo iska tuur basasha iyo milixda. Hayso qaybaha okra si aad hadhow u isticmaasho.
Ku soo celi digsiga cou cou kulaylka oo ku dar galley, si fiican u qas ilaa aad ka sameysid isku dar qaro weyn. Ku dar okra.
Saxanka ayaa diyaar u ah inuu u adeego! Ku dhaji cou cou saxan ka dibna ku korso saxan kasta oo leh fillet kalluun ah iyo caawimo caafimaad leh oo suugo ah oo ku raaxayso dhadhanka Barbados! Ama laga yaabee, ballan safar aad ku aado jannada jasiiraddan quruxda badan.
Naqshad Sandals Resorts Barbados
Habka ugu fiican ee lagu dhadhamin karo qaabka Barbados waa inaad booqato Jamhuuriyadda Cusub ee Barbados!
Africa Barbados Goobaha Sandals Dalxiiska